Himalaya Dainik » यस कारण नेपाली हिरोइन धेरै समय टिक्दैनन्
नेपाली फिल्ममा हिरोइन बन्ने प्रक्रिया के हो ? आजसम्म कसैलाई थाहा छैन । सेतो पर्दामा अनुहार देखाउने रहर र महत्वकांक्षाले थुप्रै युवती हरेक वर्ष फिल्म क्षेत्रमा हाम्फाल्छन् र डुब्छन् । कतिपयले त यौ न शो षणदेखि दुव्र्यवहार र हदैसम्मको बदनामी पनि बेहोर्नुपर्छ ।
नयाँ हिरोइनहरूले पारिश्रमिक नपाउने, पाए पनि साह्रै कम पाउने, विभिन्न सम्झौता गर्न बाध्य पारिनेजस्ता पीडा खेपेका हुन्छन् । खराब नियतको फन्दामा पनि पर्छन् । निर्माता/निर्देशकहरू किन नयाँ–नयाँ हिरोइनको खोजीमा हुन्छन् ? किन उनीहरूलाई फिल्ममा दोहोर्याइँदैन ?
भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण धेरै फिल्म नबनिरहेको यो वर्ष पनि १२ जना भन्दा बढी नयाँ हिरोइन देखिसके
गत वर्ष नेपाली फिल्म क्षेत्रमा भित्रिएका २० जनाभन्दा बढी हिरोइनमध्ये शिल्पा पोखरेल, रिश्मा गुरुङ र आश्मा डिसीमात्रै दोहोरिएका छन् । बाँकी हिरोइन किन फिल्म क्षेत्रमा आए र किन हराए ? भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण धेरै फिल्म नबनिरहेको यो वर्ष पनि १२ जना भन्दा बढी नयाँ हिरोइन देखिसकेका छन् ।
‘त्यसपछि पारिश्रमिक नदिए वा कम दिए पनि हुने र ‘हिरोइन जो लिए पनि के फरक पर्छ र ?’ भन्ने मानसिकता रहेको छ,’
बर्सेनि यसरी फिल्म क्षेत्रमा नयाँ हिरोइन प्रवेश गरिरहनुका कारण विविध छन् । तीमध्ये प्रमुख कारण निर्माता/निर्देशकको स्वार्थ देखिन्छ । ‘त्यसपछि पारिश्रमिक नदिए वा कम दिए पनि हुने र ‘हिरोइन जो लिए पनि के फरक पर्छ र ?’ भन्ने मानसिकता रहेको छ,’ लामो समय नेपाली फिल्ममा राज गरेकी अभिनेत्री रेखा थापाको अनुभव छ । पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति झन् बढेको उनी बताउँछिन् । यसकारण अहिले फिल्ममा हिरोइन दोहोरिने कम र नयाँ आउने बढी देखिएको उनी बताउँछिन् ।
‘एक वर्षअघिको कुरा हो । एकजना पुराना निर्देशकले मलाई फिल्ममा अभिनय गराउने पक्का गरे । मैले पनि फिल्म खेल्न पाउने भएपछि हुन्छ भनेँ । तर, पछि निर्देशकको नियत अर्कै देखियो । सुटिङस्पटबाटै भागेर आएँ ।’
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नयाँ हिरोइन भियाउनका पछाडि रहेको मुख्य कारण हिरोइनसँग ‘संगत गर्ने निर्माता निर्देशकको नियत’ देखिन्छ । सानैदेखिको हिरोइन बन्ने सपना साकार पार्न फिल्म क्षेत्रमा संघर्षरत निशा (नाम परिवर्तन)ले यो नियतबाट आफू पीडित बनेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘एक वर्षअघिको कुरा हो । एकजना पुराना निर्देशकले मलाई फिल्ममा अभिनय गराउने पक्का गरे । मैले पनि फिल्म खेल्न पाउने भएपछि हुन्छ भनेँ । तर, पछि निर्देशकको नियत अर्कै देखियो । सुटिङस्पटबाटै भागेर आएँ ।’
‘उमेरले ‘हजुरबुबा’ जस्तो देखिने ती निर्देशकले यात्राका क्रममा कहिले पिठ्यूँमा धाप मार्दा त कहिले घुम्तीमा अँगालो मार्दा मैले त्यसलाई ‘ठूलाबा’को केयरिङ सम्झिएकी थिएँ । सुटिङस्पटमा पुगेपछि भने मलाई उनले स्क्रिप्टका लागि छलफल भन्दै बोलाएर, ‘तिमी त बलिउडकी हिरोइनजस्तो देखिन्छ्यौ, चाँडै टप हुन्छौ, मजस्ता मान्छे भेट्नु नै तिम्रो अहोभाग्य हो, तर, मसँग सांस्कृतिक कार्यक्रमचाहिँ गर्नुपर्छ’
उनका अनुसार गाडीमा एक दिन लाग्ने लोकेसनमा उनी सुटिङका लागि पुगिन् । उनले घटनाको बेलीबिस्तार लगाइन्, ‘उमेरले ‘हजुरबुबा’ जस्तो देखिने ती निर्देशकले यात्राका क्रममा कहिले पिठ्यूँमा धाप मार्दा त कहिले घुम्तीमा अँगालो मार्दा मैले त्यसलाई ‘ठूलाबा’को केयरिङ सम्झिएकी थिएँ ।
सुटिङस्पटमा पुगेपछि भने मलाई उनले स्क्रिप्टका लागि छलफल भन्दै बोलाएर, ‘तिमी त बलिउडकी हिरोइनजस्तो देखिन्छ्यौ, चाँडै टप हुन्छौ, मजस्ता मान्छे भेट्नु नै तिम्रो अहोभाग्य हो, तर, मसँग सांस्कृतिक कार्यक्रमचाहिँ गर्नुपर्छ’ भने ।’ भन्दा ‘सांस्कृतिक कार्यक्रम’ भनेपनि त्यसको अर्थ देहसुख लुट्नु थियो भन्ने बुझेपछि आफू फिल्म नखेली काठमाडौँ फर्किएको उनले बताइन् । त्यसपछि अर्का निर्माताले पनि फिल्ममा पक्का गरेपछि आफूलाई यस्तै प्रस्ताव राखेको उनले बताइन् ।
‘म एकजना साथीसँगै पुगेँ । तर, भेटेर निस्केपछि फोनमा गाली गरे, ‘भेट्न पनि साथी लिएर आउने हो ?’ भनेर ।’ ती निर्देशकले पछिल्लोपल्ट एक्लै भेट्न आउन मात्रै नबोलाएर ‘कम्पनी दिनुपर्ने’ समेत भनेको उनले बताइन् । ”मलाई कम्पनी देऊ, म धेरै माथी पुर्याइदिन्छु’ पो भने,’ उनले भनिन्, ‘मैले गाली गरेर फोन काटिदिएँ ।’
उनी मात्रै होइन, यस्तो नियतकी शिकार भएकी थिइन् कविता (नाम परवर्तन) । उनले आफूलाई म्युजिक भिडियोको लागि प्रस्ताव गर्नेले यस्तो व्यवहार गरेको बताइन् । ‘फेसबुकमा चिनजान भएका ती निर्देशकले ‘भिडियो पनि बनाउँदै छु, मोडल चाहिएको छ’ भनेर काठमाडौँस्थित पुतलीसडक कार्यलयमा भेट्न बोलाए,’ उनले भनिन्, ‘म एकजना साथीसँगै पुगेँ ।
तर, भेटेर निस्केपछि फोनमा गाली गरे, ‘भेट्न पनि साथी लिएर आउने हो ?’ भनेर ।’ ती निर्देशकले पछिल्लोपल्ट एक्लै भेट्न आउन मात्रै नबोलाएर ‘कम्पनी दिनुपर्ने’ समेत भनेको उनले बताइन् । ”मलाई कम्पनी देऊ, म धेरै माथी पुर्याइदिन्छु’ पो भने,’ उनले भनिन्, ‘मैले गाली गरेर फोन काटिदिएँ ।’
चान्स दिने कि लिने ?
यी त नियत बुझेर उम्किएकाहरू हुन् । निर्माता र निर्देशकको प्रलोभनमा परेर सबथोक गुमाउनेहरूका व्यथा अझै चर्काे छ । आमाबुबा दुइटैको सहारा नपाएकी एक युवतीले मोडलिङलाई करिअर बनाउने सोचेकी थिइन् । यही सन्दर्भमा लोकदोहोरीमा नाम चलेका एकजना म्यूजिक भिडियो निर्देशक भेटिन् । उनले म्युजिक भिडियोमा स्थान दिने आश्वासन दिए । ती मोडलका निकटस्थका अनुसार भिडियो खेलाउने भन्दै ती मोडल उनीसँग धेरै ठाउँ घुमिन् । तर, उनले म्युजिक भिडियो खेल्न भने अहिलेसम्म पाएकी छैनन् । चान्स दिने नाममा लिन खोज्ने निर्माता निर्देशक बगे्रल्ती छन् ।
भर्खरै मोडलिङ सुरु गरेकी श्वेता (नाम परिवर्तन) लाई एकजना निर्देशकले काठमाडौँको अनामनगरस्थित एक रेस्टुरेन्टमा कामका लागि भन्दै भेट्न बोलाए । उनको ‘हाइट’ र ‘फेस’ को तारिफ भयो र ‘केही दिनपछि रिप्लाई दिने’ निष्कर्षसहित भेटघाट सकियो । केही दिनपछि श्वेतालाई निर्देशकको फोन आयो । बानेश्वरको एक बेकरी क्याफेमा भेट्न बोलाइयो ।
उनी पुगिन् । पुग्दाखेरि निर्देशक र निर्मातासँगै एकजना अर्की मोडल पनि रहेछिन् । पुगेको केही मिनेट नबित्दै अर्का एक निर्माता गाडी लिएर त्यहाँ आइपुगे । ”यहाँ पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन, अन्तै कतै जाउँ’ भने,’ श्वेताले भनिन्, ‘यतै कतै जाने होला भनेर गाडीमा चढियो । पछि त बनेपाको एक होटलमा पो लगे । अनि, तीनैजनाले मादक पदार्थ खान थाले । मलाई पनि घुमाउरो पारामा ‘त्यस्तै’ प्रस्ताव गर्न खोजे । मेरो पालो ‘जुस लिन जान्छु’ भन्दै बाहिर निस्किएँ । ट्याक्सी चढेर घर फर्किएँ ।’
श्वेताजस्ता थुप्रै महिला कलाकार अभिनय क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनन् । यसकारण उनीहरू निर्माता र निर्देशकको ‘कठपुतली’ बनिरहेका छन् । पुरुषप्रधान समाजको प्रभाव कला क्षेत्रमा पनि परेको छ । अधिकांश निर्देशक र निर्माता पुरुष रहने यस क्षेत्रमा उनीहरूले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने, जे गर भन्यो त्यही गर्नुपर्नेे बाध्यता नयाँ महिला कलाकारमा छ । ‘नत्र त फिल्म क्षेत्र नै छाड्नुको विकल्प छैन,’ एक अभिनेत्रीले भनिन् । कास्टिङ काउच, अर्थात् काम दिएबापत वा दिनुअघि कलाकारमाथि हुने यौन दुव्र्यवहार यस क्षेत्रमा सामान्यजस्तै भइसकेको छ । तर, यसबारे खुलेर बोल्न कोही हिरोइन वा मोडल चाहँदैनन् । सानैदेखि ‘अभिनयमा लाग्छु’ भन्ने उनीहरूको चाहना कतै यत्तिकै सकिने पो हो कि भन्ने डर जो उनीहरूमा हुन्छ ।
यो मामिलामा फिल्म ‘बिर्खेलाई चिन्छस्’की अभिनेत्री आयुषा राई अपवाद भइन्, जसले ‘तीन महिनामा स्टार बनाइदिन्छु’ जस्ता आश्वासन दिँदै यौन प्रस्ताव गर्ने म्युजिक भिडियो निर्देशक मुनाल शिशिर कोइरालाको हर्कतलाई जस्ताको तस्तै बाहिर ल्याइदिइन् ।
अघिल्लो वर्ष उनले कोइरालाको एक म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी थिइन् । जसको पारिश्रमिक माग्ने क्रममा उनलाई ती निर्देशकले ‘मैले भनेको मान्यौ भने तीन महिनामा स्टार बनाइदिन्छु’ सम्म भने । के गर्नुपर्ने ? भनेर सोध्दा सीधै ‘मसँग सुत्नुपर्छ, त्यो पनि बेडमा फिलिङ्ससहित’ भनेर निर्देशक कोइरालाले प्रस्ताव गरेको आयुषाले सञ्चारमाध्यमलाई बताएकी थिइन् ।
पारिश्रमिक नपाइन्जेलसम्म उनी केही बोलेकी थिइनन् । ‘१५ हजार रुपैयाँमा छ हजारमात्रै दिए, थप एक हजार जबर्जस्ती मागेको थिएँ,’ उनले सम्झिइन्, ‘त्यसपछि गलत व्यवहार सहेर बस्दा नै गलत मान्छेहरू यो क्षेत्रमा राज गरिरहेको महसुस भयो । बाहिर राम्रो मुकुन्डो भिरेर हिँड्नेहरूको असली रूप म जस्तैले बाहिर ल्याइदिनुपर्छ भन्ने लागेर नै ममाथि भएको यस्तो दुव्र्यवहार फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिएँ । त्यसपछि ती निर्देशकसँग काम गरेका थुप्रै मोडलले ‘अघि बढ्नू, हामीलाई पनि त्यस्तै गरेको छ, हामीसँग पनि प्रमाण छ’ भन्दै हौसला दिएका थिए ।’
स्क्रिप्टबाटै सुरु हुन्छ विभेद-
अभिनेत्री रेखा थापा फिल्ममा महिलामाथिको विभेद स्क्रिप्टबाटै सुरु हुने बताउँछिन् । ‘स्क्रिप्टमै नारी चरित्रको भूमिका पुरुषलाई जोडी चाहिएर राखेको जस्तो हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले आफैँले फिल्म बनाएर मात्रै नारी चरित्र पनि पुरुषभन्दा शक्तिशाली हुनसक्छ भनेर देखाइदिएँ । भूमिका शक्तिशाली नलेखिएपछि पुराना दोहा¥याउनु वा नयाँ ल्याउनुमा के फरक पर्छ ?’ पछिल्लो समय रेखा अभिनीत अधिकांश फिल्म नारीप्रधान छन् ।
उदाहरणका लागि ‘काली’, ‘हिम्मतवाली’, ‘तथास्तु’लाई लिन सकिन्छ । प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म ‘रामप्यारी’मा पनि त्यस्तै रहेको उनले बताइन् । फिल्म समिक्षक मनोज पण्डित पनि रेखाको विचारसँग सहमत देखिए । ‘हाम्रा फिल्मका कथाहरूमा बढीजसो पुरुष पात्र ‘प्रोटागोनिस्ट’ हुन्छन्,’ उनले भने ‘हामीकहाँ कथा सोच्दा नै पुरुष पात्रलाई केन्द्रमा राखेर सोचिन्छ । महिला पात्र त केवल ‘सप्लिमेन्ट्री’ जस्ता हुन्छन् । त्यही भएर अभिनेत्री जो राखे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण निर्माता र निर्देशकहरू नयाँ अनुहार खोज्नतिर लागिरहेका छन् । त्यो सँगसँगै उनीहरूको खराब नियत पनि जोडिन सक्छ । तर, महिलालाई प्रोटागोनिस्ट राखेर फिल्म बनाइएको खण्डमा स्वतः राम्रो र अनुभवी अभिनेत्रीको आवश्यकता खड्किन्छ । त्यो अवस्थामा स्थापित भएकैलाई दोहोर्याइन्छ ।’ खराबसँग लड्ने, चुनौतीसँग लड्ने, संघर्ष गर्ने आदि काम पुरुषले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने नेपाली समाजको मानसिकताका कारण पनि फिल्मका कथामा महिला पात्रलाई ‘प्रोटोगोनिस्ट’का रूपमा प्रयोग नगरिएको उनको तर्क छ ।
पहिलो फिल्मबाटै आजित-
गत वर्ष रिलिज भएको फिल्म ‘नोभेम्बर रेन’को सुटिङताका त्यही फिल्मबाट अभिनयमा डेब्यू भएकी अभिनेत्री छुल्ठिम गुरुङले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको चर्चा फिल्म क्षेत्रमा व्यापक चल्यो । ‘नयाँ कलाकार भएका कारण सुटिङ सेटमा भोगेका दुव्र्यवहारका कारण उनी फिल्म नै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेकी थिइन्,’ उनी निकट स्रोतले भन्यो । तर, सुटिङका दौरानमा देखिएको खटपटलाई उनले ‘एउटै खाटमा सुतेपछि लात त लागिहाल्छ नि’ भन्ने उखान हाल्दै प्रतिक्रिया दिएर त्यस्तो असहज केही नभएको बताएकी थिइन् ।
उनले ‘नोभेम्बर रेन मेरो पहिला तथा अन्तिम फिल्म हो’ भनेर ०७० सालको होलीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताएकी थिइन् । त्यतिबेला फिल्म रिलिज भएको थिएन । त्यसयता उनले कुनै पनि फिल्ममा अभिनय गरेकी छैनन् । उनी आफ्नै ब्यानरमा फिल्म निर्माण गरेर अभिनयमा फर्कने तयारीमा छिन् । ‘अरूको फिल्म खेल्न छुल्ठिमलाई मनै छैन । पहिलो फिल्मबाटै आजित भइसकिन्,’ उनी निकट साथीले बताए ।
नेपालमा अधिकांश फिल्मको सुटिङ सेटमा पुरुषकै उपस्थिति बाक्लो हुन्छ । त्यही भएर फिल्म क्षेत्रमा भित्रिने नयाँ महिला कलाकारमाथि विभिन्न खाले दुव्र्यवहार हुने गरेको बताइन्छ । जसकारण अधिकांश कलाकार पहिलो फिल्म खेलिसकेपछि दोस्रो फिल्म खेल्न तयार हुँदैनन् ।
यसै वर्ष फिल्म ‘कामचोर’बाट रजतपटमा डेब्यू भएकी अभिनेत्री काजोल खनाल हत्तपत्त फिल्ममा काम गर्न डर लाग्ने बताउँछिन् । ‘फिल्मको अफर नआएको त होइन,’ उनले भनिन्, ‘तर, स्क्रिप्ट नै चित्त बुझ्दैन । फेरि अफर गर्ने निर्देशक र निर्माता पनि प्रायः नयाँ हुन्छन् । उनीहरूको नियत बुझ्नै गाह्रो ! त्यही भएर खेल्न डर लाग्छ ।’
लगानी भित्र्याउन नयाँको प्रयोग-
कति निर्देशकले निर्माता खोज्न पनि नयाँ हिरोइनको प्रयोग गर्छन् । आफूले डेब्यू गर्न लागेको युवती राम्री रहेको र ऊसँग संगत बढाइदिने भन्दै विभिन्न पैसावाललाई फिल्म बनाउन प्रेरित गर्ने गरेको समेत भेटिन्छ । यति मात्रै होइन, फिल्ममा लगानी खोज्न आफ्नै ‘गलफ्रेन्ड’ समेत प्रयोग गर्ने निर्देशक पनि छन् । जसको फिल्म वृत्तमा निकै चर्चा हुन्छ ।
‘उनले त्यतिबेला ती हिरोइनलाई निर्माताकहाँ रमाइलो गर्न पठाए,’ एक फिल्मकर्मीले नाम नबताउने शर्तमा दाबी गरे, ‘त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्ध लामो समय टिकेन ।’
केही समयअघिको कुरा हो, एक निर्देशकको एक नयाँ अभिनेत्रीसँग अफेयर चलिरहेको थियो । ती निर्देशक नयाँ फिल्मका लागि निर्माताको खोजीमा थिए । निर्माता फकाउन ती निर्देशकले आफ्नै प्रेमिका रहेकी अभिनेत्रीलाई प्रयोग गरेको चर्चा फिल्म क्षेत्रमा त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म ताजै छ । ‘उनले त्यतिबेला ती हिरोइनलाई निर्माताकहाँ रमाइलो गर्न पठाए,’ एक फिल्मकर्मीले नाम नबताउने शर्तमा दाबी गरे, ‘त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्ध लामो समय टिकेन ।’
फिल्ममा नयाँ हिरोइन र म्युजिक भिडियोमा नयाँ मोडललाई लगानी भियाउनैका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि यतिबेला मनोरञ्जन क्षेत्रमा मौलाएको छ । ‘९० प्रतिशत हिरोइन र मोडल बन्न चाहने युवतीले कि त पैसा हाल्नुपर्छ, कि त निर्माता/निर्देशकले जे भन्यो त्यहीं मान्न सक्नुपर्छ,’ एक अभिनेत्रीले ठोकुवा गरिन् । म्युजिक भिडियोबाट अभिनयमा छिरेकी ती अभिनेत्रीले सुरु–सुरुका दुईतीनटा भिडियोमा खेल्न आफूले पैसा हालेको समेत खुलाइन् । अभिनेत्री रेखा थापा अभिनयलाई करिअरका रूपमा सोच्ने भन्दा पनि अनुहार देखाउने र रमाइलो गर्ने ठाउँका रूपमा लिने गर्दा पनि महिला कलाकारमाथि विभिन्न समस्या निम्तिएको बताउँछिन् ।
यही वर्षको दसैँमा रिलिज भएको फिल्म ‘सुश्री’बाट ‘हिरोइन’ बन्ने धोको पूरा गरिन्, आशिका तामाङले । फिल्मको पोस्टरमा निर्माताको नाम आत्माराम थापा थियो । तर, पर्दापछाडि आशिकाको लगानी थियो । आशिकाजस्तै थुप्रै युवतीहरू ‘पैसा’ र ‘रहर’को आडमा फिल्म क्षेत्रमा भित्रिइरहेका छन् । कतिपय ‘सक्षम’ हुँदाहुँदै पनि लगानी गरेर डेब्यू हुन बाध्य छन् ।
नेपाली फिल्ममा निर्माताहरू हिरोइनका लागि लगानी गर्न कञ्जुस्याइँ गर्छन् । ‘हिरोइनका कारण फिल्म चल्दैन भन्ने मानसिकताको उपज हो यो,’ अभिनेत्री रेखा थापा भन्छिन्, ‘१०–१५ हजार दिए खेलिहाल्छन्, नयाँ लिऊँ भन्ने सोच निर्माता/निर्देशकमा हाबी छ ।’ हिरोइनमा आफ्नो क्षमताप्रति आत्मविश्वास नहुँदा पनि पारिश्रमिकमा विभेद भइरहेको उनको तर्क छ । ‘त्यसैले पारिश्रमिकमा उनीहरू हिरोले जसरी पेल्न सक्दैनन् । आफ्नो क्षमताको मूल्यांकन नगरी निर्माता/निर्देशकको वरिपरि घुम्छन् । जसले पछि आफैँलाई हानी गर्छ ।’
‘पैसा दिनुपर्दैन’ र उनीहरूको ‘सफलताको जस पनि लिन पाइन्छ’ भनेर थुप्रै निर्माताहरू नयाँ अनुहार खोजी गर्छन् । ३० वर्षदेखि फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय निर्माता छविराज ओझा नयाँ अभिनेत्रीलाई डेब्यू गराउन माहिर छन् । उनैले रेखालाई पनि अभिनयमा डेब्यू गराएका हुन् । अभिनयलाई निरन्तरता दिन र आफूलाई सुरक्षित बनाउन रेखाले छविसँग बिहे पनि गरेकी थिइन् । तर, यो सम्बन्ध १२ वर्षपछि टुट्यो ।
अहिले उनीहरू ‘डिभोर्स’ गरेर एक्लो जीवन बिताइरहेका छन् । रेखासँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि छविले रजनी केसीलाई फिल्म ‘लोफर’बाट नयाँ हिरोइनका रूपमा भियाए । अहिले उनी शिल्पा पोखरेललाई अघि बढाइरहेका छन् । शिल्पालाई गत वर्ष फिल्म ‘लज्जा’बाट रजतपटमा प्रवेश गराएका उनले अन्य दुई फिल्म ‘हवल्दार सुन्तली’ र ‘किस्मत २’मा पनि खेलाइसके । उनले फिल्म चलाउनका लागि शिल्पालाई ‘बिहे गर्छु’सम्मको हल्ला चलाएका थिए ।
त्यसो गर्दा उनलाई थुप्रै फाइदा छन् । पहिलो त उनी नयाँलाई पारिश्रमिक दिँदैनन् । दोस्रो, करिअरको सफलताको जस लिन्छन् । तेस्रो, हिट भएपछि पनि पारिश्रमिक दिने बेला आफैँ हाबी हुन्छन्,’
छवि नयाँ अनुहारलाई भियाएर उनैलाई स्थापित गराउन किन लागिपर्छन् ? ‘त्यसो गर्दा उनलाई थुप्रै फाइदा छन् । पहिलो त उनी नयाँलाई पारिश्रमिक दिँदैनन् । दोस्रो, करिअरको सफलताको जस लिन्छन् । तेस्रो, हिट भएपछि पनि पारिश्रमिक दिने बेला आफैँ हाबी हुन्छन्,’ उनी निकट स्रोतले बतायो । यसमा सत्यता पनि छ । किनकि, आफ्नै पूर्वपत्नी रेखा थापासँग उनले यो सब गरेकै हुन् । ‘फिल्मचाहिँ यहाँ खेल्नु, पैसाचाहिँ अर्को निर्मातासँग गएर माग्नु’ निर्माता छविराज ओझाको नक्कल गर्दै थुप्रै फिल्मकर्मी यसरी ठट्टा गर्ने गर्छन् । नयाँलाई पारिश्रमिक दिनुपर्दैन भनेर निर्माता/निर्देशकहरू नयाँ हिरोइन र मोडललाई फिल्म र म्युजिक भिडियोमा लिइरहेका छन् ।
चर्चाको ‘हतियार’ मात्र
हिरोइनका लागि लगानी गर्न कञ्जुस्याइँ गर्ने निर्माताहरू फिल्म चलाउनका लागि भने उनीहरूलाई नै चर्चाको ‘हतियार’ बनाइरहेका छन् । फिल्म क्षेत्रमा आउने थुप्रै महिला कलाकार विभिन्न निर्माता र निर्देशकसँग नाम जोडिएर बन्ने गसिपका कारण पीडित छन् । फिल्मकै हिरोसँग हिरोइनको अफेयर चलेको हल्ला पिट्नसमेत निर्माताहरू पछि पर्दैनन् ।
‘आफ्नो इज्जत नै दाउमा राखेर यो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । यो एकदम दुःखको कुरा हो ।’
‘फिल्म चलाउनका लागि हिरोइनसँग आफ्नो अफेयर भएको हल्ला चलाइदिन्छन्,’ अघिल्लो वर्ष यस्तै पीडा खपेकी एक अभिनेत्रीले भनिन्, ‘आफ्नो इज्जत नै दाउमा राखेर यो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । यो एकदम दुःखको कुरा हो ।’ त्यसो त निर्माता छविराज ओझा यो मामिलामा अगाडि छन् ।
फिल्म ‘लज्जा’को रिलिजताका अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल र उनको नाम जोडिएर थुप्रै गसिप बनेका थिए । त्यो गसिप बन्नुमा उनकै हात थियो । जसकारण शिल्पाले पछि स्पष्टीकरण नै दिनुपरेको थियो । ‘आफ्नो बाउसमानको मान्छेसँग बिहे हुन सक्दैन’ भनेर उनले त्यतिबेला प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।
‘श्रम ऐनअन्तर्गत पारिश्रमिक पाउने प्रक्रियामा जान नसक्ने अवस्थाले गर्दा उनीहरू पारिश्रमिकको समस्याबाट प्रताडित भइरहेका छन् । कानुनतः सम्झौता गरेर फिल्म खेल्न सक्ने वातावरण नभएर पनि यस्तो भएको हो ।’
थुप्रै महिला कलाकार पारिश्रमिक समयमा नपाउने, भनेजति नपाउने जस्ता समस्या पनि झेलिरहेको बताउँछन्, फिल्म समीक्षक मनोज पण्डित । भन्छन्, ‘श्रम ऐनअन्तर्गत पारिश्रमिक पाउने प्रक्रियामा जान नसक्ने अवस्थाले गर्दा उनीहरू पारिश्रमिकको समस्याबाट प्रताडित भइरहेका छन् । कानुनतः सम्झौता गरेर फिल्म खेल्न सक्ने वातावरण नभएर पनि यस्तो भएको हो ।’